डा. लक्खीदेवी सुन्दासको निधन - Samay Dainik
डा. लक्खीदेवी सुन्दासको निधन
दार्जीलिङ, 16 अगस्त।
भारतीय नेपाली साहित्यका विशिष्ट नारी सर्जक डा. लक्खीदेवी सुन्दासको हिजो अपरान्ह 12.38 बजी स्वर्गवास भयो। जसको आज हिन्दु धर्म परम्पराअनुसार सिलगढीमा अन्तिम संस्कार गरियो। 85 वर्ष पुगेकी डा. सुन्दासको स्वास्थ्यमा गत महीनादेखि अचानक परिवर्तन देखा परेको थियो, उनलाई गत केही दिनअघि मात्रै श्‍वासको असुविधा हुन थालेपछि सिलगढीस्थित एक निजी नर्सिङ होममा उपचारको लागि भर्ना गरिएको थियो। हिजो अपरान्ह 12.38 बजी उनको निधनको खबर फैलिनसाथ दार्जीलिङ पहाडमा पनि शोकको लहर छाएको थियो। परिवार सूत्रले जनाएअनुसार, नेपाली साहित्य सम्मेलन र गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले डा. सन्दासको शव दार्जीलिङ ल्याउने अपील गरेका थिए, तर यसो हुन सकेन। यसैले डा. सुन्दासको शव सिलगढीस्थित डा. आईबी थापा स्कूल परिसरमा अपरान्ह2बजीदेखि राखिएको थियो। जहाँ दार्जीलिङ पहाड साथै अन्य स्थानका शुभचिन्तकहरूले उनको अन्तिम दर्शन गरे। यसपछि सिलगढीमा नै आज डा. सुन्दासको अन्तिम संस्कार गरियो।
डा. सुन्दासको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै जीटीए अध्यक्ष अनित थापा, गोजमुमोका भूमिगत नेता विमल गुरुङ आदिले प्रेस बयान जारी गरेका छन्। अनित थापाले जारी गरेको प्रेस बयानमा भनिएको छ, भारतीय नेपाली साहित्यका विशिष्ट नारी सर्जक डा. लक्खीदेवी सुन्दासको स्वर्गारोहण भएको समाचारले आहत बनेको छु। सिलगढीको एउटा नर्सिङ होममा उपचाराधीन अवस्थामा नै उनी परलोक गमन भइन्। डा. सुन्दास भारतीय नेपाली साहित्यको एक सशक्त प्रतिनिधि अनुहार थिइन्। उनको विशिष्ट साहित्यिक योगदानलाई सम्मान गर्दै जीटीएको सूचना एवं सांस्कृतिक विभागले वर्ष 2016-मा नै उनलाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डले पनि सम्मानित गरेको थियो। डा. सुन्दासको रूपमा भारतीय नेपाली साहित्यले एक अनमोल रत्न गुमाएको छ। यस अवसरमा शोकाकुल परिवारप्रति पनि मेरो सहानुभूति छ।
यसरी नै गोजमुमोका भूमिगत नेता विमल गुरुङले पनि एक प्रेस बयान जारी गरेर नेपाली साहित्यमा डा. लक्खीदेवी सुन्दास एउटा आदरणीय नाम रहेको बताउँदै उनको निधनले आफू मर्माहत बनेको बताए। उनले भनेअनुसार, उनी एक प्रखर साहित्य समालोचक, कवयित्री, कथाकार, साहित्यकी गहन अध्येता थिइन्। उनी एक आदर्श शिक्षिका, एक कुशल प्रशासक र एक चिन्तक थिइन्। पेशाको हिसाबले मुख्य गरी दार्जीलिङ सरकारी महाविद्यालयको नेपाली विभागमा प्राध्यापन गरी पछिबाट त्यही महाविद्यालय कै भारप्राप्त अधिकारी पनि बनेकी थिइन्। उनले विभिन्न महाविद्यालय साथै विश्‍वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् र नयाँ सर्जकहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनेकी थिइन्। आज उनै आदरणीय गुरूमाको निधनले सम्पूर्ण नेपाली-गोर्खाली समाज नै आहत बनेको छ। आज दार्जीलिङले साहित्यको आमा गुमाएको महसुस गरेको छ। उनको निधनले दार्जीलिङ साहित्य जगत टुहुरो बनेको छ।
फोटोः डा. लक्खीदेवी सुन्दास।
एसकेएम सरकारको विरोधाभासपूर्ण काम
सिक्किममा प्रजातन्त्र हौसिएको त होइन? (2)
भाषा मान्यता दिवससँगै कविता आवृत्ति, वाक पटुता र तर्क प्रतियोगिता सम्पन्न
Font Size A+ A- D2Total Viewsखरसाङ, 20 अगस्त। साहित्य कला संस्थान तीनधारेको आयोजनामा 28औं...
This Year : 78771
Total Users : 78939
Total views : 1082102